Sida loo soo celiya iPhone, iPad, iPod iyo taabashada ka kaabta iCloud
> Resource > iCloud > Sidee soo celinta iPhone, iPad, iPod oo ka kaabta iCloud
Sida loo soo celiya iPhone, iPad, iPod oo ka kaabta iCloud
iCloud Content kaabta
1 Warbixiinta iCloud kaabta
Access iCloud Content kaabta
Download iCloud kaabta
Ceshano Photos ka iCloud
Ka iCloud Soo Celinta iPhone
Ka iCloud soo ceshano Data
Kabsado Xiriirada ka iCloud
Free iCloud shawladda kaabta
2 Transfer iCloud kaabta
iCloud Xiriirada in PC
iCloud Photos in Android
iCloud Xiriirada in CSV
Nidaameed iCloud la Android
iCloud Calendar in Android
iCloud Xiriirada in Outlook
3 Celinta ka kaabta iCloud
Nidaameed iPhone la iCloud
Ka iCloud Soo Celinta iPad
Ka Lugood / iCloud Soo Celinta iPhone
Qalabka iCloud tallaabsato
Tallaabsato iCloud Lock u iPhone
Kabsado iCloud Password
Laawayaasha ay garab iCloud
Ilowday Password iCloud
5 Delete iCloud
Delete kaabta iCloud
Saar iCloud Account
Delete iCloud Photos
Delete iCloud Apps
Delete Xiriir aan la rabin ka iCloud
6 Talooyin iCloud
About kaabta iCloud
iCloud Isticmaalka Talooyin
iPad iCloud kaabta Tricks
Lugood vs kaabta iCloud
Marka aad ka iibsan iPhone cusub, iPad, iPod ama, waxaad u baahan kartaa in la soo celiyo xogta laga gurmad iCloud si ay u helaan wax kasta oo dib u soo qalab aad. Tani siyaabo aad u shaqeeyaa ka dib markii aad dib u qalab macruufka ah sidii mid cusub. Haa, soo celiyo qalabka macruufka ka gurmad iCloud waa mid aad u fudud (sida loo tuso tallaabooyinka soo socda). Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xaalada kale. Marka aad hesho xog muhiim ah oo aad laga badiyay ku saabsan qalabka macruufka, laakiin aad dareentid in aad kaliya oo aan si fudud u soo celin kartaa macruufka qalab ka iCloud, sababta oo ah qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan qalab ay haatan tahay mid aad u muhiim ah. Xaaladdan oo kale, waa in aad eegista celin macruufka aad kaga imaanayo iCloud. Dooro sida saxda ah si loo soo celiyo qalabka macruufka ka iCloud gurmad taasi suud aad u.
Jidka 1. Soo Celinta ka iCloud Backcup (bedelo dhammaan macluumaadka hadda la xogta laga gurmad iCloud)
Jidka 2. Xulo Soo Celinta ka kaabta iCloud (qaado xogta la doortay, Uma ay baahna inay masixi iPhone / iPad / iPod)
Muhiim : sidan in la soo celiyo iPhone, iPad, iPod kaga imaanayo iCloud masixi doono dhamaan xogta hadda ku qalab aad. Sidaas hor hoos u qaadan in hawsha, raad raac aad xog muhiim ah oo dhan, sidoo kale in ay iCloud ama Lugood.
Tallaabada 1. Isku qalab macruufka la shabakad deggan. Network A deggan ka dhigi doonaa celin sii habsami leh. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka oo dhan ka iCloud soo celin gurmad, fadlan ha ka barkinta aad macruufka qalab iyo shabag. Haddii kale, aad ku guul dareysato doonaa si loo soo celiyo kaga imaanayo iCloud.
Tallaabada 2. Tag Settings> General> celi, dooran masixi All Content & Settings on qalab aad. Waxa aad qaadan doontaa dhowr daqiiqo illaa masixi dhammaan xogta ku saabsan iPhone, iPad, iPod ama. Just samir.
Tallaabada 3. In Kaaliyaha Setup ah, ka jaftaa fursad u Soo Celinta ka kaabta iCloud . Gal iCloud la ID Apple aad. Markaas dooran gurmad iCloud faylka xaq u hormariyo Soo Celinta dusheeda.
Xulo celin ka gurmad iCloud MA aad u baahan tahay si ay u fuliyaan habka aad iPhone, iPad, iPod ama. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay ku dhameysan habka on your computer, Windows PC ama Mac. Software aan dooneynaa in ay isticmaalaan waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac OS X) . Waxay kaa caawin doona inaad ka iCloud gurmad la xogta kuu xiisootay soo celiyo qalabka macruufka.
Furfurmi Soo Celinta iPhone / iPad / iPod ka kaabta iCloud
Waxaad soo celin kartaa wax kasta oo aad rabto in aad ka kaabta iCloud si iPhone, iPad iyo iPod taaban!
Waraaqda gurmad iCloud u eegis iyo dib u soo kabashada, oo isku mid u ah gurmad Lugood.
Si toos ah baarista iPhone inuu ka soo kabsado xogta lumay ka.
Sida ay u soo kabashada, waxaad dooran kartaa wax kasta oo aad rabto in aad ka dib markii previewing.
La jaan qaada macruufka 9, iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS oo dhan iPads.
Aad loo sahlo in la helo xogta laga badiyay sababo kala duwan sida tirtirka, resetting, macruufka failure casriyayn, iwm
Tallaabada 1 Orod barnaamijka oo saxiix in aad xisaabta iCloud
Ka dib markii ay ku rakibidda barnaamijka, waxa maamula on your computer. Markaas dooran hab-kabashada ee ka soo kabsado kaabta iCloud ah. Waxaad arki doonaa suuqa kala hoose (Halkan qaadan version Windows sida tusaale). Hadda saxiixa in aad xisaabta iCloud by galaya ID Apple iyo sirta ah.
Fiiro gaar ah: Barnaamijku wuxuu doono MA ilaalino macluumaadka aad account iCloud. Just dhigay aad maskaxdaada u geliso.
Tallaabada 2 Download iyo Macdan aad gurmad iCloud
Marka aad qortey, barnaamijka si toos ah u heli doontaa files gurmad in aad xisaabta iCloud. Dooro mid ka mid ah in aad rabto in aad soo celin xog ka iyo guji Download button hoos menu of State . Markaas-upka soo pop, dooran xogta aad rabto in aad soo celiso qalab aad. Waxay qaadataa waqti dheer si ay u soo bixi dhan iCloud gurmad faylka. By dooran xogta ay u soo bixi, waxa gaaban habka doono download ah. Marka ay complete, Riix badhanka la mid ah si ay u bilaabaan waxaa soo saarida, oo aad arki doonaa suuqa kala ah sida soo socota.
Download Wondershare Dr.Fone u version maxkamad macruufka hoose si aad u leeyihiin isku day ah hadda!
Talaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo soo celin gurmad ka iCloud
Waqtiga sawiridda, waxaad bilaabi kartaa previewing xogta laga helay aad gurmad iCloud. Waxaa jira sawiro, videos, fariimaha, xiriirada, qoraalo, iwm Intooda badan waa la heli karaa si ay u eegis. Waxaad sax karo wax kasta oo aad rabto oo iyaga walba ayuu soo celin si aad u computer hal mar ee la soo dhaafay. Later, waxaad isku dayi kartaa software, sida Wondershare TunesGo , in aad nuqulka xiriirada, sawiro, videos, heeso, iyo in ka badan ka your computer si aad iPhone, iPad, iPod iyo
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka - Download iyo Waraaqda kaabta iCloud
Kabsado xogta iPhone iyadoo lagu eegayo aad iPhone, soo saarida Lugood iyo iCloud files gurmad.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo eegista soo kabsadaan wixii aad rabto in aad ka iPhone, Lugood iyo gurmad iCloud.
U dayactir macruufka si caadi ah oo aan laga badinin xogta sida hab-kabashada, bricked iPhone, screen cad, iwm
Si buuxda u la jaan qaada macruufka 9 , iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Pro, iyo dhamaan noocyada kale ee macruufka qalab
Ka macruufka Qalabka kabsado Data
Waraaqda Lugood ee kaabta Content
Waraaqda iCloud Content kaabta
U dayactir macruufka in Xaaladaha caadiga ah
Kabsado fariimaha qoraalka ka iPhone
macruufka 9 Device Data Recovery
Sidee si ay u helaan kaabta iCloud
Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada ka iCloud
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka iCloud
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka iCloud
Sidee inuu ka soo kabsado iCloud Password
Ka Samsung Galaxy soo kabsado tirtiray Files
Sida loo tirtireyso Text tirtiray on iPhone
Waxyaabaha aad ogaanaysid Waa intaadan gadan loo isticmaalo iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado Notes ka kaabta iCloud
Sida loo Waraaqda Videos ka kaabta Lugood
Waa maxay Celebrity Photo daadin Na bar karaa
Sida loo Waraaqda Videos ka kaabta iPhone / Lugood